‘महरा यौन काण्ड’लाई यसरी पनि हेरौँ - नेपालबहस
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा काेराेना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग छलफल
समाचार प्रभाव : बीमा समितिको निर्देशन २४ घन्टा नबित्दै फेरि परिवर्तन !
कोरोना बीमा स्थगनमा माफियाको चलखेल, सरकारलाई असफल बनाउने पाण्डेको प्रयास
कामपामा एक हजार ९८२ जनाको कोरोना बीमा
युएईमा अलपत्र परेका १६८ जना काठमाडौं आइपुगे
लकडाउनको आज ७४ औं दिन, सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्याे
गोदावरीमा फलफूल र औषधिजन्य वृक्षरोपण गरिने
अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ! अमेरिकामा कति व्यापार घाटा भयो ?
प्रहरी संगठन नेकपाको कब्जामा !
आज साँझदेखि दैलेखमा निषेधज्ञा लागू हुने
एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर तयार, सेनाको स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालित
राष्ट्र बिखण्डन गर्न देउवा र ओली सहमत !
थाहा छ, नेपाली समाज त यसरी ध्वस्त हुँदैछ नि !
सेना ब्रम्हास्त्र हाे, विवादमा नपारौंः पूर्व प्रधानसेनापति कटवाल
कोरोनाको भय : मानसिक समस्याको जोखिम
मनीषाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
मनिषाले सीमा विवाद बढेपछि भारत छाडिन्, लकडाउनमा निजी गाडी चढेर नेपाल आइन्
आज राति चन्द्रग्रहण लाग्दै, तर नेपालबाट नदेखिने
स्वदेश फर्कनेलाई टेलिकमकाे निःशुल्क सिमकार्ड, होल्डिङ सेन्टरमा वाइफाइ सेवा
विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई निःशुल्क सिमकार्ड
आजै म्यान्माबाट आएकालाई सबै ‘होम क्वारेन्टाइन’मा
प्रहरी हवल्दार र स्वास्थ्यचौकी प्रमुखमा कोरोना सङ्क्रमण, पत्रकार उच्च जोखिममा
युक्रेनका २५ खेलाडीमा कोरोनाको पुष्टि, घरेलु लिग फुटबल अनिश्चित
नेपालकी फुटबलर सावित्रा भण्डारी विश्वकै चामत्कारिक खेलाडी
गृहपृष्ठ विचार / बहस लेख / रचना ‘महरा यौन काण्ड’लाई यसरी पनि हेरौँ
‘महरा यौन काण्ड’लाई यसरी पनि हेरौँ
सत्तारुढ नेकपामा नयाँ कोतपर्व महरा काण्ड, विगतका उदाहरणीय घटना र आलोक प्रवृत्तिमाथि विश्लेषण
२२ असोज, काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा यतिबेला सिंहदरबारको प्रहरी हिरासतमा कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरू गर्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण गर्ने दशैँपछिको साइत कुरेर दिन काटिरहेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री, गृह, सञ्चार, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाएका, सफलताको सिढी चढ्दै सभामुख पछि प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न थालेका महराको गल्तीबारे विवाद गर्नु उचित नहोला । तर महरा काण्ड के पूर्वमाओवादीभित्रको नयाँ घटना हो ? कि विगतका घटनाहरूको पुनरावृत्ति हो ? विषयवस्तु भित्र गहिराईसम्मै पुगेपछि वास्तविकता प्रष्ट हुनेछ ।
पूर्वमाओवादीभित्रको यौनकाण्ड सम्झिने हो भने अचम्मका घटनामा पुगिन्छ । भृकुटीमण्डप (काठमाडौँ) मा भएको तत्कालीन एमाओवादीको विस्तारित बैठकमा पीडित महिलाहरूले रुवाबासी गरेपछि जिल्लाहरूबाट उजुरी÷प्रतिवेदन संकलन गर्न धर्मशीला चापागाईँको संयोजकत्वमा कल्पना धमला र कमला नहर्की सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो ।
पार्टी फुट्नु अघिमात्र यस्ता ७ सय घटना एमाओवादी केन्द्रिय कार्यालय (पेरिसडाँडा) मा दर्ज भएको देखिन्छ । तर यी काण्ड र उजुरीको कुनै न्यायसंगत अन्त्य भएको थाहा पाईएन । दण्डहिनता र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नेतृत्वको बदमासी ।
विगतमा यानप्रसाद गौतम (आलोक) रचना चौँलागाईँसँग प्रेम गरेवापत कारवाही र कारवाहीकै क्रममा मारिएका थिए । माओवादी पार्टीभित्र ‘आलोक प्रवृत्ति’ भनेर निकै चर्चित भएको सुनिन्थ्यो । प्रचण्डकै छोरा प्रकाशले तीनवटी स्वास्नी ल्याएकोमा माओवादीभित्र १० रेक्टरस्केलको भुईँचालो नै गयो । तर उनले पोइल ल्याएकी बिना मगरलाई प्रचण्डको जोडबलमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बनाईएको छ ।
सोलु–सल्लेरी ब्रिगेडका बटालियन कमाण्डर गणेश वि.क. ले प्रेम गरेकोले कारवाही गर्दा उनी पार्टी नै छोडेर हिँडेका थिए (पछि फर्किए) । माओवादीमा रहँदा प्रेम प्रकरणले गर्दा बदनाम भएपछि तत्कालीन एमालेमा गएका रवीन्द्र श्रेष्ठ छोरी उमेरकी युवती टिपेर फरार भए । सिन्धुलीका हरिबोल गजुरेल (शीतलकुमार) ले सिन्धुलीकै निरु दर्लामीसँग प्रेम गरेको मुद्दा चर्चित भएकै हो । आजका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पम्फा भुसाल पनि यौन काण्डमा सँजाय भोगेकै व्यक्ति हुन् । पुस्कर ढुङ्गेल र रेणुका ढुङ्गेल (गीता) बीचको प्रेम सम्बन्ध पनि कारवाहीमा परेकै हो ।
चौथो बृगेडका कमाण्डर ‘विकल्प’ त भान्जी लिएरै भागे । हेमन्त प्रकाश वली (सुदर्शन) द्वन्द्वकालमै यौनकाण्डमा फसेर पछाडि परेका हुन् भनिन्छ । राम कार्की र राज्यव्यवस्था समितिमा सदस्य पनि रहेकी पूर्वतिरकी एक नेतृबीचको घटना पनि निकै बदनाम भएर फैलिएकै हो । पाल्पाका संविधानसभा सदस्य गुणाखर बस्याल यौनकाण्डकै कारणले फरार भए ।
महराका विद्यार्थी हुन् वर्षमान पुन ‘अनन्त’ जसलाई रोल्पाको एक विद्यालयमा महराले पढाएका थिए । तर अहिले महरालाई सिध्याएर रोल्पाको जिल्ला राजनीतिमा आफ्नो एकछत्र नेतृत्व बनाउने ध्याउन्नमा छन् भनिन्छ । एक चिनियासँग साँसद किन्ने सत्ताको फोहोरी र पतित अभ्यासका लागि पचास करोड रुपैयाँको माग गर्ने पनि यिनै हुन् ।
अर्की सभासद लीला सोमई, नवलपरासीकी सभासद सीता पौडेल, टोपबहादुर रायमाझीकी पत्नी ‘सीमा’को प्रेम काण्ड आदि अहिलेको महरा काण्डकै स्तरका बहुबिवाह र यौन काण्डसम्बन्धी केही चर्चित घटना हुन् । अतः महरा काण्ड जति गम्भीर हो, त्योभन्दा गम्भीर पक्ष उनलाई फसाउने षड्यन्त्र, सत्तालिप्साको ‘कोतपर्व’ पुनरावृत्ति र आपराधिक राजनीतिको ज्वलन्त उदाहरण पनि बन्दैछ । महराले गल्ती गरे, चुके, आफ्नो हैसियत र उचाई भुलेर आफ्नै बेइज्जति तथा संसदीय व्यवस्थाकै बदनामी गराए ।
यी हुन् कृष्णबहादुर महरा
पाठकलाई थाहा होला कि नहोला, एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा बी.एड् पढ्न नेपालगंजमा बस्दासम्म नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी फाँट, ने.बि.संघका समर्थक थिए । कालान्तरमा कृष्णसेन ‘इच्छुक’ सँग भेट भएपछि यिनी विस्तारै कम्युनिष्ट राजनीतितिर आकर्षित भएका हुन् । त्यसैले यिनी ‘इच्छुक’ लाई आफ्नो मेन्टर मान्छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराई र एमाओवादी छोडेर एमाले हुँदै आजकाल बेखबर भएका रविन्द्र प्रधान पनि काँग्रेसबाटै राजनीतिक यात्रा थालेका नेता हुन् । गृहमन्त्री भएका बेला ०६८ असारमा यिनले संसदको राज्यब्यवस्था समितिको बैठकमा एक प्रहरी अधिकारीले दिएको सुझाब भनी उल्लेख गर्दै यिनले बोलेको वाक्य निकै प्रसिद्ध भएको थियो, “राम्रो सुरक्षा कायम गर्न सयसय जना डन र तस्कर पक्रिनुपर्छ, तर त्याभन्दा अगाडि तिनलाई संरक्षण गर्ने सयजना राजनीतिक नेता पक्रिनुपर्छ ।”
कृष्णबहादुर महराको अर्को रोचक तथ्य, यिनले सातकक्षासम्म बिहारको जहानावादमा पढेका हुन् । त्यो बेला यिनका पिता रविचन्द्र महरा त्यहाँ दरबानको काम गर्थे । यिनी आपूmलाई नास्तिक तथा धर्मनिरपेक्ष भन्न रुचाउँछन्, तर फोटो हेर्नुहोस्, उनी नेपालगञ्जको गोस्पल एसेम्ब्ली चर्चबाट पादरी के. बी. बस्सेलबाट ‘प्रभु येशु’ को आशिर्वाद लिइरहेका छन् ।
महराका विद्यार्थी हुन् वर्षमान पुन ‘अनन्त’ जसलाई रोल्पाको एक विद्यालयमा महराले पढाएका थिए । तर अहिले महरालाई सिध्याएर रोल्पाको जिल्ला राजनीतिमा आफ्नो एकछत्र नेतृत्व बनाउने ध्याउन्नमा छन् भनिन्छ । एक चिनियासँग साँसद किन्ने सत्ताको फोहोरी र पतित अभ्यासका लागि पचास करोड रुपैयाँको माग गर्ने पनि यिनै हुन् । पचास सांसदलाई एकएक करोड रुपैयाँका दरले किनेर आफ्नो सरकार बनाउने टेलिफोन वार्ता तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सूदले भेट्टाएपछि त्यो प्रेसको विषय बन्यो र निकै सन्सनी मच्चाएको थियो । ती र त्यस्तै कारणले गर्दा महरालाई भारतले आफ्नो मान्छे होइन भन्ने सूचीमा राखेको थियो ।
त्यसो त युद्धकालमा भारतमा बसेको बेला उनले ‘अमर उजाला’ नामक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै ‘नेपालमा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएस्आईको चलखेल बढ्नसक्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी सक्छौँ’ भनेर भारतको विश्वास जित्न खोजेका थिए । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकार हुँदा यिनैले त्यो बेलाको राम जन्मभूमि कि बाबरी मस्जीद भन्ने सवालमा त्यहाँ रामको मन्दीर नै बनाउनुपर्छ भनेर भाजपा नेतृत्वको सरकारको विश्वास जित्न खोजेको थियो ।
चुनाब हारेर बाहिरै थन्केका ढाक्रेबाहेक प्रचण्डका लागि तत्कालीन संविधानसभाभित्रका भरपर्दा खेलाडीका रुपमा अग्निप्रसाद सापकोटा, हरिबोल गजुरेल र कृष्णबहादुर महरा नै थिए ।
नत्र धर्मै नचाहिनेलाई मन्दीर कि मस्जीद भन्ने के सरोकारको चिन्ता हुनु ? भारतको अयोध्यामा मस्जीद होइन राम मन्दीर बनाउन जोड गर्ने एमाओवादी नेपालमाचाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कारणले नेपालका क्रिश्चियनहरूसँग किन हिमचिम बढाइरहको छ ? उत्तर सोझो छ— एमाओवादी धर्मलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको हतियार बनाइरहेको छ, चाहे क्रिश्चियनसँग नजिकिएर होस् वा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पशुपतिनाथमा मूल भट्ट परिवर्तन गर्ने रडाको होस् ।
०६८ बैशाखमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतको निम्तोमा नयाँदिल्ली गएको बेला यिनलाई पनि सँगै लिएर गएका थिए । त्यो भ्रमणमा प्रचण्डले महरा भारतविरोधी होइनन् भन्ने स्पष्टीकरण दिएर दिल्लीलाई रिझाउने काममात्र गरेनन्, आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारी उनै भएको संकेत पनि दिएका थिए ।
२०४८ सालको आम निर्वाचनमा आजको माओवादीको पूर्वरुप संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नामबाट चुनाब लडेर जित्ने ९ जना सांसदमध्ये महरा पनि एक थिए ।
२०१५ साल असारमा जन्मेका महराले पार्टीभित्रको राजनीतिमा सबैलाई उछिनेर माथिल्लो तहमा पुगिसकेका थिए । दोस्रो संविधानसभाको गठनदेखि नै तत्कालीन माओवादीले शक्ति बाँडफाँटको क्रममा नेपाली काँग्रेससँग दुईटा हैसियत मागेको थियो– पहिलो, संविधानसभाको अध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा र दोस्रो त्यही बखतमा भएको चारबुँदे सहमतिले ब्युँताएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डको स्थायी अध्यक्षता हुनुपर्ने ।
ती दुइटा पद पाएमा एमाओवादी राष्ट्रपतिको चुनाब गर्नतिर नलाग्ने,काँग्रेसको सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने तहमा पुगेको थियो । एमाओवादीले आफ्ना एजेण्डा लागु गर्नमा एमालेसँग भन्दा काँग्रेससँग सजिलो हुने ठहर गरेर यस्तो निष्कर्ष बनाएको सम्झौँ । साथै एमालेलाई उसले साइजमा ल्याउनु पनि थियो । अरू त चुनाब हारेर बाहिरै थन्केका ढाक्रेबाहेक प्रचण्डका लागि तत्कालीन संविधानसभाभित्रका भरपर्दा खेलाडीका रुपमा अग्निप्रसाद सापकोटा, हरिबोल गजुरेल र कृष्णबहादुर महरा नै थिए ।
पार्टी फुट्नुभन्दा अघि, फुटेपछि र संविधानसभाको निर्वाचन अघि पनि महराले पार्टी मिलाउन आफ्नो घरमा दुवै पक्षलाई जुटाएर वार्ता गराएका थिए, त्यो कुनै काम लागेन । तै पनि यिनी पार्टीभित्रका सबभन्दा समन्वयकारी नेताका रुपमा चिनिन्छन् । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि यिनलाई मन पराउँथे ।
किनकि उनकै शब्दमा ‘महरा कुरा छिटो बुझ्छ र समझ्दार पनि छ । यो बाबुराम भन्ने जन्तु त पढेको भन्नुमात्रै रहेछ । मूर्ख मान्छे !’२०४८ सालको आम निर्वाचनमा आजको माओवादीको पूर्वरुप संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नामबाट चुनाब लडेर जित्ने ९ जना सांसदमध्ये महरा पनि एक थिए । तर त्यसपछि यिनीहरूले चुनाब बहिस्कार गरेर हिँडे र एकैचोटी २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा सामेल भए ।
त्यो बेला दाङ् ३ नम्बर क्षेत्रबाट चुनाब लडेर जितेका महराले ०७४ को निर्वाचन पनि दाङ् जिल्लाबाटै निर्वाचन लडे र जिते । कृष्णबहादुर महरा आफ्नो पार्टी बाहिरको समुदायमा पनि जानेमानेका सन्तुलनवादी नेता हुन् ।
अघिल्लो लेखदुई लाख नगदसहित ११ जना जुवाडे पक्राउ
अर्को लेख किन बोलाए प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बैठक ?
हरेक नेपालीको जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्ने दायित्वमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ : सभामुख सापकोटा
राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुखसँग संसद बैठकमा कोरोना नसर्ने आधार माग गर्दै युवानेता भण्डारी
सभामुखद्वारा संसद् बैठक सञ्चालनको तयारीबारे छलफल
समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकार प्रहरी हिरासतमा
प्रतिकूल समयमा सङ्घीय संसद्को भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख सापकोटा
नयाँ वर्षलाई समृद्धि र दिगो विकास वर्ष बनाऔँ
अर्को सूचना नभएसम्म प्रदेशसभाको बैठक स्थगित
एमसीसी विषयमा गम्भीर ढङ्गले बहस : सभामुख
फ्रेवुअरी 7, 2020
भाेलीदेखि विदेशमा अलपत्रको उद्धार, पहिलो पटक बाग्मतीका २६ जना नेपाल आउँदै
लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारको तयारी : यस्तो छ भदौसम्मको मोडालिटी
शिक्षा / स्वास्थ्य1535
मेडिकल कलेज / अस्पताल1075
विचार / बहस393
स्कुल / कलेज314
तस्वीर आफै बोल्छ293